Pump ရင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် 808nm 20W Diode Laser Fibre - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > High Power Diode Lasers > Pump ရင်းမြစ်အတွက် coupled 808nm 20W Diode Laser Fiber
Pump ရင်းမြစ်အတွက် coupled 808nm 20W Diode Laser Fiber
Pump အရင်းအမြစ်အတွက် 808nm 20W Diode Laser Fiber ကိုအလင်းရောင်၊ Pumping နှင့်ပစ္စည်း Processing များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ BoxOptronics တွင်အထူးသဖြင့်ထုတ်လွှတ်သောထုတ်လွှင့်စက်များရှိပြီး 808nm fiber-coupled diode laser ၏မူပိုင်နှင့်စွမ်းအင်ကိုပေါင်းစပ်ထားသောအားဖြင့် 20W အထိရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလှိုင်းအလျားနှင့်ပါဝါထွက်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
Pump ရင်းမြစ်အတွက် 808nm 20W Diode Laser Fiber ၏ ၁. အကျဉ်းချုပ်
808nm 20W fiber coupled diode laser ကိုအလင်းရောင်၊ pump နှင့် material processing တို့တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ BoxOptronics တွင်အထူးသဖြင့်ထုတ်လွှတ်သောထုတ်လွှင့်စက်များရှိပြီး 808nm fiber-coupled diode laser ၏မူပိုင်နှင့်စွမ်းအင်ကိုပေါင်းစပ်ထားသောအားဖြင့် 20W အထိရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလှိုင်းအလျားနှင့်ပါဝါထွက်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
Pump အရင်းအမြစ်အတွက် coupled 808nm 20W Diode Laser Fiber ၏နိဒါန်း
Pump အရင်းအမြစ်အတွက် 808nm 20W Diode Laser Fiber ၏ထူးခြားချက်များ
20W Output ပါဝါ;
0.22NA Fiber 200 / 220Î¼mသို့မဟုတ် 105 / 125um;
4. Pump အရင်းအမြစ်အတွက် coupled 808nm 20W Diode Laser Fiber အသုံးပြုခြင်း
Pump အရင်းအမြစ်အတွက် 808nm 20W Diode Laser Fiber ၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25â„)
operating output ကိုပါဝါ Pout 20.0 - - W
ရရှိနိုင်သည့်လှိုင်းအလျား၏အတိုင်းအတာ λ 803 808 813 nm
ရောင်စဉ်တန်း width ကို FWHM @ Î” Î» - 3.5 - nm
လက်ရှိ Threshold ဟုတ်တယ် - 1.2 1.5 A
Pout တွင်လည်ပတ်နေသောဗို့အား VOP - 5.6 - V
ဆင်ခြေလျှောထိရောက်မှု η - 2.7 - W / A
အမျှင်အရှည် Lf - 1.2 - m
Connector အမျိုးအစား - တရားမဝင်သော, SMA905 -
၆။ ကုန်စည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် 808nm 20W Diode Laser Fiber Pump အရင်းအမြစ်အတွက်ချိတ်ဆက်ထားသည်
၇.၈၈၈nm 20W Diode Laser Fiber ကို Pump အရင်းအမြစ်အတွက်တွဲဖက်ပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခြင်း
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၌လုပ်သည်၊ စျေးပေါ၊